MSF WAXA AY DAWEYSEY 91 DAGAALLADA KU DHAAWACMEY MUDO 5 MAALMOOD GUDAHOOD - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
MSF WAXA AY DAWEYSEY 91 DAGAALLADA KU DHAAWACMEY MUDO 5 MAALMOOD GUDAHOOD
12.05.2009 | Gobolka Banaadir, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
Ka dib markii ay muddo kooban kala joogsadeen dagaallada caasimadda Soomaaliya, ayaa ay rabshaduhu dib uga bilowdeen waddooyinka Muqdisho.Afartii maalmood ee la soo dhaafey (8dii – 11kii Maajo), ayaa kooxaha Dhakhaatiirta aan Xuduudda Lahayn /Médecins Sans Frontières (MSF), ay qaabileen 91 qof oo ku dhaawacmey dagaallo kuwaas oo ka yimid xaafadaha la deggan yahay. Dhammaan dhaawacyada ayaa ka dhashey qaraxyo ama xabado. Bukaanadan waxaa ka mid ahaa, 38 haween iyo carruur ay da’doodu ka yar tahay 14 jir ah, taas oo muujineysa in dadka rayidka ahi dhibaato weyn ka soo gaarto dagaallada.
Toddobaadyadii ugu dambeeyey, ayaa dadku bilaabeen in ay ku soo noqdaan magaalada, laakiin rabshadaha ku soo noqdey waddooyinka, ayaa ku celiyey in ay magangelyo ka raadsadaan xerooyinka dadka soo barokacay, kuwaas oo ku yaalla duleeddada magaalada Muqdisho halkaas oo MSF ay ku siiso biyo ayna ugu qaybiso agabka gargaarka.
Sanadkii la soo dhaafey, cusbitaalka 60-ka sariirood qaada ee MSF ku leedahay Dayniile ayaa daaweeyey 5,250 qof oo qabey dhaawacyo. 3,093 waxa ay qabeen dhaawacyo la xiriira dagaal. In ka badan kala bar bukaannada ayaa ahaa haween iyo carruur ay da’doodu ka yar tahay 14 jir. MSF waxa ay in ka badan 10 milyan oo litir oo biyo ah, iyo jiirgaanno iyo bacaha guryaha kor laga saaro u qaybisey dad ku nool afar xero oo dadka soo barokacay ka deggan yihiin degmada Dayniile.
MSF waxa ay Soomaaliya ka shaqeyneysay ilaa 1991kii. Waxaana ay ugu yeereysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh iska-ho-rimaadka in ay ixtiraamaan bedqabka iyo ammaanka dadka rayidka ah.
Tags: dagaal, dhaawac, Muqdisho